“Jijjiirama Ummanni Oromoo dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaa itticabee fide eenyumaafuu dabarsinee hin laannu(kenninu)” Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Jijjiirama Ummanni Oromoo dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaa itticabee fide eenyumaafuu dabarsinee hin laannu(kenninu)” Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa
“Jijjiirama Ummanni Oromoo dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaa itticabee fide eenyumaafuu dabarsinee hin laannu(kenninu)”
Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa
Dhaamsa miseensota raayyaa ittisaaf
Miseensota raayyaa ittisa/waraana, yeroo ammaa kana daangaa biyyaa irraa kaafamtanii uummata Oromoo keessatti bobbaafamtanii jirtu. Raayyaan ittisa biyyaa, akkuma maqaan ibsu, weerara halagaa sabaa fi biyyatti dhufu ittisuuf ijaarama. Dirqamni raayyaa ittisaas akka heerra Itiyophiyaa aangoo 87 irratti kaahametti, dhimma siyaasaa irraa walaba ta’uun walabummaa biyyaa eegsisuu fi dirqama heerri kennuf raawwachuu dha.
Yaa miseensota raayyaa ittisa! Yeroo ammaa kana maaliif akka Oromiyaatti bobbaafamtan beektuu? Gaaffii mirgaa uummatni gaafate ukkaamsuun fedha keessanii? Gaaffii mirgaa gaafachuun gaaffii siyaasaa fi dimokraasiiti! Raayyaan ittisaa ammoo dhimma siyaasaa irraa walaba ta’ee fedhii uummataa cinaa akka dhaabbatu heerri dirqisiisa! Mirga siyaasaa fi dimokraasii uummataaf kenname, heerra Itiyophiyaa aangoo 29 – 44 tti ibsamee jira. Garuu murni EPRDF bara baraan aangoo irra turuuf jecha, gaaffii uummataa sirnaan kessummeessuuf fedha dhabuun, raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa irratti bobbaasee ajjeesisaa jira.
Yaa waraanaa uummatatti bobbaafamtanii! Uummati kun uummata miskiina, mootummaaf gibira baasee isiniin jiraachisaa jiru dha! Ummatni kun gaaffii mirgaa gaafate malee badii dalage homaatuu hin qabu! Mootummaan EPRDF dantaa siyaasaa isaa guuttachuuf qofa akka uummata loltaniif uummata irratti isin bobbaasee fi uummata keessa isin qubachiisuuf yaada. Sanatti dabalatees akka ijoollee Oromoo, kan waraana bilisummaa Oromoo (WBO) keessa jiran, kan gaaffii mirgaa, kan heerri biyyitti kennuuf, kan bilisummaa saba isaanii gaafachaa jiran akka adamsitanii ajjeestan dirqamni isinitti kennamee jira. Kun akka heerri Itiyophiyaattis ta’e akka seera addunyaatti, akkasumas seera uumaa fi uumamaa birattillee fudhatama hin qabu!
Akka heerri jedhutti waraanni walabummaa uummataaf hidhata, WBOs uummata isaa bilisoomsuuf hidhate. Kanaaf obbolaan lamaan sababaa dantaa EPRDF jecha walitti dhukaasuun hin feesisu! Dirqamni amma isnitti kenname kun shira EPRDFn ta’e jedhamee uummata keessan waliin walitti isin buusuuf qindaawe dha. Uummata ajjeesuun akeeka keessan ta’uu hin qabu! Uummata malee, biyyi fi jireenyi keessan gatii hin qabu!
Murini EPRDF uummata yaadaan moohachuu dadhabe fi abdii kutate, uummata afaan qawween jilbeeffachiisuuf isin bobbaase. Dhugaan jiru garuu uummata afaan qawween jilbeeffachiisuun gonkumaa hin danda’amu! Yaa ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirtanii, akeeki EPRDF kun akeeka isin itti ijaaramtanis miti! Murin EPRDF fi mootummaan amma isin bobbaase kun ni jijjiirama! Burkutaa’ees kufa! Yeroon kunis ni darba! Uummatni garuu bara baraan jiraata! Gochaa badii fi dabaa uummata irratti raawwattanii gaafatamaa seenaa hin ta’iinaa! Obboloota keessan hin adamsiina!
Raayyaan ittisaa (waraanni) uummata isaaf yaadu; uummata isaa caqasu, rakkoo uummataa hubatu, cinaa uummataa dhaabbatu, seenaa isaa keessatti kabajaa, ulfinaa fi jaalala bara baraan qabaata! Seenaa kabajaas goonfata! Waraanni uummata irratti daba dalagu ammoo ni faca’a, ni du’a, du’a seenaa hin qabne du’a! Kanaaf yaa waraanaa raayyaa ittisaa keessa jirtuu, uummata kee cinaa dhaabbadhuu! Bilisummaa saba keetiif qooda sirraa eegamu gumaachi! Dirqama hammeenyaa murni EPRDF sitti kennite hin fudhatiin! Uummataa fi obboloota kee hin ajjeesiin! Uummata kee fi lammii keef gaachana ta’i! Warra uummataa fi obboloota kee ajjeesan hudhii qabi! Gumaa uummataas baasi! Gaafatama seenaa fi seeraa jalaa of-baasi! Uummata cinaa dhaabbachuun, seenaa dalaguun, warraaqsa Oromoo dhugoomsuu keessatti qooda fudhadhu! Akka seenaan bara baraan si yaadatuuf!
Injifannoo Ummata Oromoo fi saboota Cunqurfamoof!
እንዴት በመቶ ሚሊዮን ህዝብ ተጠልቶ ሊኖር ይቻላ? ለምን በይፋ ይቅርታ ጠይቀው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብረው ቢኖሩ አይሻልም ወይ? ትግራይ ለብቻዋ ምን ታፈልቃለች ?ዛሬ ድሬዳዋ ከነማና ደደቢት እግርኳስ ተጫውተው ድሬ 2:0 አሸንፋ ወያኔን ሌባመሆኑን ከነገረች በኋላ ከሜዳው አባራለች።
Maal Abbaa Ishee! Qeerrookoo Buli,Galataa kee kee qeerroo oromiyaa
Jajabe akka sibilaa
Guyyaa har’aa Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa #Calanqootti waltajjiin dinqisiisaa geeggeeffamee ture.
Waltajjii kanarraatti jaallan argamaan
_ #Mahammad_Ahmad qophe=bakka bu’aa ummata mana marii
Adde #Caaltuu_Saanii=itti gaafatamtuu galiiwwanii
_Jaal #Araarsoo_Biqila= hoggana itti aanaa ABO
_Addee #Fariiyaa_Aliyyii=itti gaafatamtuu ijaarsa siyaasa magaalaa goodina H/B
_ #Hussen_Faayyiisoo =Bulchaa godiina H/B
_ #Abduraashid_Abduramaan/abbaa Urjii=barraassa seenaa Oromoo
_Garee #CDA(Chelenko Development Alliance) baratoota
Mana Barnoota Sadarkaa 2ffaa Magaala Calanqootti Barachuun Sadarkaa Hojii Olaanaarratti Argaman Barattoota Mana Barumsa Itti Barachaa Turan Deeggaruuf Meeshaalee Barnoota Gara Garaa Bitachuun Barattoota Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Calanqootif Deeggarsa Taasisan
Haayyoonnii kunneen deeggarsa Meeshaalee Barnoota kana kan taasisuu danda’an manneen barnoota kanneen meeshaalee barnootaatin gurmeessuun barattootnii barnoota isaanii akkaataa barbaadamuun meeshaalee barnoota kanneenin deeggaramanii beekumsa barbaachiisuu akka horatanii fi boru haayyoota biyya tana dhaaluu oomishuu keessattii gahee isaaniirraa eeggamuu gumaachuuf yaadame kan taasifame ta’u wayita hasaawa taasifameettii ibsameera. Kuniis lammiin kamiyyuun hojii gara garaarratti bobba’e hojjechaa jiru hundu dirqama lammuummaa isaa akka bahuu fakkeenya gaarii ta’uf yaadame kan taasifame akka ta’es dabalataan himameera.
Gosoota meeshaalee barnoota deeggarsa taasifameetis Kitaaboota adda addaa haala baruu fi barsiisuu keessatti akka galtee dabalataattii tajaajiluu danda’a lakkoofsaan 1,300 fi Koomppitara 5 bitachuun guyyaa har’a keessummoota sadarkaa federaalaa, naannoo fi godinichaarraa affeerran, Hoggantoota Aanichaa, barattoota fi maatiin barattootaa bakka argamanitti koreelee manneen barnootaata qeebalchiisaniiru.
Fuula duraas mana kitaaba hawaasaa magaala Calanqoo keessattii ijaaruuf namnii kamiyyuun maallaqa fi beekumsa barbaachiisuu gumaachuuf waadaa waliigaluu fi barattoota hirmaataniif gorsa laachuun waltajjiin bifa midhagina qabun gaggeeffamaa ture,qaamoolee deeggarsa taasisaniif xalayaa ragaa fi beekkamtii keennuun xumurameera.